वाणिज्य बैंकले दिन थाले दोहोरो अंकमा ब्याज, कुन बैंकको कति ? - Arthatantra.com
वाणिज्य बैंकले दिन थाले दोहोरो अंकमा ब्याज, कुन बैंकको कति ?
सेयर बजारमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका बाणिज्य बैंकहरुले असोज १ गते (आज) देखी लागू हुनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । केही बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा मुद्दती खातामा पैसा राख्दा दोहोरो अंकको ब्याज पाइने छ ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार सानिमा र सनराइज बैंकमा मुद्दती खातामा पैसा राख्दा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज पाइने छ ।
सनराइज बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा ५.०७ देखि १०.०७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने छ । यस्तै सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेप तर्फ ७ देखि १०.०१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने छ ।
यस्तै नबिल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ६.५१ देखि ९.२६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ । एनएमबि बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७.५० देखि ९.०२ प्रतिशतसम्म, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८.०६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको जनाएको छ । कृषि विकास बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ६ देखी ८.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ ।
यता एभरेष्ट बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७ देखि ८.६१ प्रतिशतसम्म दिने भएको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ४.०५ देखि ८.५५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको जनाएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८ देखि ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८.५१ देखि ८.७६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने छ । यता प्रभु बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७.२५ देखी ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
स्टयान्र्डड चार्टर्ड बैंकको मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्दा ४.५ देखि ७.५० प्रतिशतसम्म ब्याज पाएने छ । सिभिल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७.५५ देखि ९.२५ प्रतिशत, प्राइम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ८ देखि ९.७६ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ९.२६ प्रतिशत, माछापुच्छे« बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ देखी ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ ।
बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाएसँगै यसले सेयर बजारमा निकै असर पर्ने आंकलन सुरु भएको छ । बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेकै दिन सेयर बजार ७६ अंकले घटेको छ ।
पछिल्लो समय सेयर बजार अस्थिर बनिरहेको बेला बैंकले ब्याज बढाउँदा लगानीकर्ताको ध्यान ब्याज खाने तर्फ जाने र त्यसले बजारलाई प्रभाव पार्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १ शुक्रवार १३:०९ मा प्रकाशित
News Views: 247
अघिल्लाे आइतवार ङादी ग्रुपको साधारणसभा: २०% बोनस वितरण गर्ने, अन्य के-के छन् एजेण्डा ?
पछिल्लाे मेगा बैंकको मुद्दती तथा बचत खातामा उच्च ब्याज, नयाँ बचत खाता योजना सार्वजनिक